Amit Khanna Qormooyinkiisa Martech Zone |
Maqaallada by Amit Khanna
Amit Khanna waa Madaxweynaha Ganacsiga Yar iyo Dhexdhexaad ee Koox-kooxeed halkaasoo uu mas'uul ka yahay wadista dakhliga qayb badan oo shirkadda ka mid ah iyo horumarinta xiriir istiraatiijiyad ruqsad siin. Waxa kale oo uu hoggaamiyay laba ka mid ah wax-soo-saarka shirkaddu ku guuleysatay Software-as-a-Service, InfoUSA iyo Salesgenie.
Shan Khalad oo Khalad ah Barnaamijka Suuqgeynta Emailkaagu Waa Inuu Ka Fogaado
Arbacada, Oktoobar 29, 2014 Arbacada, Oktoobar 29, 2014 Amit Khanna
In ka badan 222 milyan oo isticmaaleyaal ah oo ku nool Mareykanka oo keliya, iimaylku wuxuu leeyahay awood weyn oo ah suuq suuqgeyn ah. Emailku waa aalad iswaafajin ah oo loo isticmaali karo in lagu diiriyo astaamaha qabow, la xiriirida macaamiisha jira iyo in la gaaro rajada lagu wado in lagu horumariyo ganacsi cusub. Xirfadleyda suuqgeynta iimaylka waxay fahansan yihiin aasaasiga, sida muhiimada ay leedahay farsameynta xariiq maado qasab ah oo ay kujirto wicitaan adag oo ficil ah. Laakiin xitaa suuqleyda emailka halyeeyada ah way dhici karaan